Azia Atsimo · Oktobra, 2019 · Global Voices teny Malagasy
Azia Atsimo · Oktobra, 2019
Tantara mikasika ny Azia Atsimo tamin'ny Oktobra, 2019
Pakistana 31 Oktobra 2019
Bangladesh 26 Oktobra 2019
India 24 Oktobra 2019
India 22 Oktobra 2019
Vonjitaitra ao Pakistana 2007
Pakistana 21 Oktobra 2019
Ny 3 Novambra 2007, nanambara ny Filohan'i Pakistana, Pervez Musharraf, fa latsaka an-katerena ny firenena. Notapahana ireo fantsona fahitalavitra tsy miankina, nosakanana ireo finday tao an-toerana ary nahena ny fidirana Aterineto. Novalian'ireo bilaogera io toejavatra io, na dia mety hampidi-doza ny fiarovana ny tenany aza ny fanakianana ny governemanta sy ny fanaovana hetsika.
Bangladesh 14 Oktobra 2019
Video: Roa volana fikatonana ao Kashmir
India 07 Oktobra 2019
60 andro izay no niato ny fiara fitateram-bahoaka, voabahana ny servisy finday, mikatona ny sekoly sy ny kolejy ao Kashmir. Mitatitra avy ao Shopian i Basharat Amin, mpifandray amin'ny vondrom-piarahamonina Video Volunteers.
India 04 Oktobra 2019